नेपालमा बढ्दो अपराधिक गतिविधि
विगत केही दिन देखि नेपाल निकै अनौठा किसिमका घटनाहरुसँग जोडिंदै आएको छ। एक पछि अर्को गरि निकै फरक र नौलो तरिकाबाट केहि अपराधिक कार्यहरु भएका छन्। सारा विश्व कोरोना प्रकोप माहामारीबाट गुज्रिरहेको बेलामा नेपाल पनि सोहि रोगको सिकार भएको छ जसका कारण सरकारले सिंगो देशलाई नै बन्द स्थितिमा राख्न बाध्य भएको छ। सारा गतिविधि बन्द भएको बेलामा घरमै बसी आफ्नो सुरक्षा गर्ने बेलामा हाल अहिलेका समाचारका शिर्षक बन्ने गरेका विभिन्न किसिमका अपराधिक घटनाहरुले गर्दा मानिसहरुलाई एउटा त्रासको अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। आखिरमा किन एक्कासी नेपालमा यसरी अपराधिक घटनाहरु बढ्न थाले ? कसरी एकैचोटि अपराधिक कार्यको सूचीमा निकै दर्दनाक किसिमका घटनाहरु यही समयमा एका-एक देखिन थाले ?
केही दिन अगाडी रुकुम-जाजरकोटमा घटेको घटनालाई हेर्ने हो भने यो घटना नेपालमा पहिलो पटक नै घटेको हो। जातिय विवादका कारणले उक्त घटना घटेको भनिएको सो घटनालाइ विस्तृत रुपमा हेर्दा त्यस्तो घटना हुन स्वभाविक छैन। जातीय विभेद आफैँमा एउटा ठुलो अपराध हो। नेपालको संविधानले धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्दको हकको व्यवस्था गरेको छ। सोहि दफाको उपधारा (५) ले यस विपरित कुनै कार्य गरेमा गम्भीर सामाजिक अपराध गरेको मानिने र सो कार्य दण्डनीय हुने संग-संगै पिडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने समेत हक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। जुन घटना जाजरकोट-रुकुममा घट्यो यसले एउटा नयाँ त्रास र वदलाको भावना त्यस समाज, गाउँ-ठाउँमा जन्माएको छ।
प्रेममा परि केटीलाई भगाई लाने योजना राखेर आफ्ना साथीभाईलाइ आफु संगै बटुलेर हिँडेका किशोर युवाहरुको समूह एउटा अकल्पनीय आक्रमणको सिकार हुन पुगे जसका कारण उनीहरुले आफ्ना केहि साथीहरुलाई सदा सदाकै निम्ति विदाई गर्नु पर्यो। झन्डै १९ -२० जनाको समुहमा सिंगो गाउँ नै उर्लिएर एका-एक हातपात गर्नु, हात हतियार प्रयोग गरी आक्रमण गर्नु कुनै स्वभाविक कुरा होइन तर यो घटनामा चार युवाहरुको भेरी नदीमा लास भेटियो र अझै तिन जना व्यपत्ता रहेका छन् भने बाँकीका युवाहरु सो आक्रमण बाट बाँच्न सफल भएका थिए। सुन्दा निकै अनौठो प्रकारको यस घटना ठिक कुनै चलचित्रमा गरिएको कार्य जस्तै लाग्ने कुरा; अहिले वास्तविकता बनि हाम्रै देश, हाम्रो समाजमा यो कार्य गरिएको छ। के यो घटना हुनको निम्ति जातिय विभेद नै हो त ? जातको कारणले गर्दा नै यदि हो भने ज्यान सम्म लिने कार्य गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन। यसले समाजमा नयाँ प्रवृतिको चेतावनी दिएको छ। जातिय विभेदकै कारणले हो भने पनि विभेद गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुन्छ तर यहाँ जातकै नाममा एकजना नभई गाउँका भर्खरका ठिटाहरुलाई मृत्यु सम्मको भागेदार मानिसहरुले बनाएका छन्। यस घटनामा हेर्दा अपराधि एउटा मात्रै नभई निकै ठुलो संख्यामा रहेको देखिन्छ जसले गर्दा एउटा त्रासको अवस्था यस घटनाले जन्माएको छ।
नेपालमा जातिय विभेद परा पुर्व कालदेखि चल्दै आएको थियो। मुलुकी ऐन १९१० हेर्ने हो भने तागाधारी, मतवाली, पानि चल्ने, पानि नचल्ने जस्ता शब्दहरुको प्रयोग भएको पाइन्छ। तर त्यस पश्चात मुलुकी ऐन २०२० ले सबै जातिय विभेदलाइ अपराधको संघया दिएर यसलाई खारेज गरेको थियो। अहिले हाल चलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पनि दफा (१६१) मा कुनै पनि भेदभाव जन्य कार्य गर्न नहुने र यदि सो गरेमा सोहि दफा को उपदफा (२) अनुसार कसुर गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्ष सम्म कैद वा तिस हजार सम्म जरिवाना वा दुवै हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा (३) ले कोसैले पनि जो कोहीलाई जातिय विभेद गर्न गराउन नहुने र यदि गराएमा बढीमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको सजाय हुने र उपदफा (२) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कसुर गरेमा उल्लिखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
त्यस्तै मोरंग बेलबारीमा घटेको घटनालाई पनि केलाउने हो भने सो घटना पनि निकै नौलो र दर्दनाक किसिमको छ जसमा एक व्यक्तिले आफ्नो आमाको हत्या गरि अन्य व्यक्तिको सामुन्ने आफ्नो प्राण त्यागेको घटना रहेको छ। आफ्नो आत्महत्या गरि प्राण त्याग्नु जस्तो घटना नौलो थिएन तर आफ्नो शरीरलाईआफैँले चक्कुले रेटी र आफ्नो छाती, पेटमा छुरा प्रहार गरि आफ्नो प्राण त्याग्ने जस्तो अपराधिक गतिविधि पाइएको हो। आत्महत्या आफैँमा एउटा अपराधिक कार्य हो तर उनले आफ्नो आमालाई स्वयम आफैँले हत्या गरि आफुले पनि प्राण त्यागेका छन्। यस्ता निकै गम्भीर र दर्दनाक किसमका घटना हाल हाम्रो देशमा घटी रहेका छन्। यसले गर्दा समाजमा विभिन्न किसमका प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्।
अर्को एउटा घटनालाई पनि हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यका भित्रै भक्तपुर जिल्ला सुर्यविनायकको घलातेमा एउटी आमाले आफुले जन्माएको भर्खरको शिशुको हत्या गरेको भन्ने समाचार पनि आएको थियो। यसरी हेर्दा एक पछि अर्को गर्दै अपराधिक गति विधिहरु बढ्दै छन्। यति मात्रै नभई ए.टि.एम. बाट पैसा चोरी गर्ने जस्ता अपराधिक कार्यहरु पनि बढ्दो रुपमा छन्। आखिरमा किन यो समयमा यस्ता फौजदारी प्रकृतिका गतिविधिहरु वृद्धि भईरहेका छन् ? किन व्यक्तिहरु अपराधिक कार्य गर्न अघि बढेका छन् ?
अपराधिक कार्यको कारणहरु हेर्ने हो भने सामान्यता अपराधीक शास्त्र अनुसार जव कोहि व्यक्ति गरिबीको चपेटामा पर्छ, केहि अपुग हुन्छ भने सबै भन्दा छिटो त्यही व्यक्तिहरुको दिमागमा नकारात्मक कुराहरुले ठाउँ लिने गर्छन् र यसै स्वरुप उनीहरु अपराधिक कार्यहरु गर्न अघि बढ्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। यदि कोहि व्यक्तिलाई खान लगाउन पनि राम्ररी नपुग्ने अवस्था भयो भने उसले चोर्नु, लुट्नु जस्ता गतिविधि गर्न वाध्य हुनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा वाध्यताले पनि सो व्यक्तिले अपराध गर्नु परेको हुन्छ। त्यस्तै यदि मदिरा तथा लागु औषध सेवन गर्ने गर्छ भने पनि सो व्यक्तिले अपराधिक कार्य गर्न वाध्य हुने गर्छन्। लागु औषध आफैँमा नराम्रो कुरा हो र त्यो सेवन गर्न थाले पछि मानिसलाई त्यसको लत लाग्ने गर्दछ। यदि सो कुरा नपाएमा उनीहरु त्यसको प्राप्तिका निम्ति जे जस्तो काम गर्न पनि तयार हुन्छन। यसले उनीहरुको दिमागको क्षमता कम गर्दै जान्छ र आफ्नो काबु बाट बाहिर जाने गर्दा पनि उनीहरु छिट्टै अपराधिक कार्यहरुमा संलग्न हुने गर्दछन।
कहिले कहीं अपराध कार्य गर्नका निम्ति सो व्यक्ति अपराधिक मनस्थिति भएको नै हुनु पर्छ भन्ने हुँदैन ,जसमा कति अवस्थामा भने आफ्ना साथि, मित्र हरुको संगतबाट व्यक्ति अपराधिक कार्यहरुमा संलग्न हुने गर्दछन्। यो कुरा विशेष गरि किशोर किशोरीहरुको हकमा बढी लागु हुने गर्दछ। आफ्नो घर परिवार भन्दा पनि बढी आफ्ना साथी-भाइ स्टमित्रहरुको बढी भरोषा गर्ने गर्दा पनि कति निर्दोष व्यक्तिहरु अपराधिक कार्यहरुमा संलग्न हुने गर्छन्। कहिले काहिँ भने साथी भाईको कर कापमा पनि कुनै कार्य गर्दा थाहा नै नभई अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका घटना पाइएको छ।
राजनीति पनि अपराधको निम्ति एउटा महत्वपूर्ण कारण हो जसमा अपराधिक कार्य गराउने व्यक्ति कोहि एउटा हुन्छ भने अपराध कार्य गर्ने अर्को हुन्छ। यो अवस्थामा भने अपराध गर्ने व्यक्ति समातिए पनि गराउने व्यक्ति भने थाहा हुँदैन जुन प्राय जसो राजनीतिक कुराहरुको निम्ति गरिएका अपराधहरुका किसिममा पर्दछन्। कतिपय अवस्थामा भने राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व बनाइ राख्न र सत्तामा टिक्नको निम्ति पनि अपराधहरु गर्ने गरिन्छ। त्यसै कारण राजनैतिक कारणले गर्दा पनि अपराधहरु हुने गरेका छन्।
कहिले काहिँ अपराध धर्म र जात जातिको कारणले पनि हुने गर्दछन्। रुकुम-जाजरकोटको घटना को कारण पनि यही नै देखाइएको छ। हाम्रो देशमा खासै धर्मको कारण गम्भीर अपराध घटेका भन्दा पनि जातिय विभेदका कारण भएका अपराध बढी भएको पाइएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा हिन्दु र मुसलमान बिचको सम्बन्धलाई लिएर भएका घटना नेपालमा त्यस्ता धेरै घटना भने छैनन् तर पनि अपराध हुनुको मूल कारण मध्ये धर्म र जातिय विभेद पनि एक हुन्।
वेरोजगारी पनि अर्को एउटा मुख्य कारणको रुपमा लिने गरिन्छ। कुनै मानिससंग कमाई हुँदैन, आय श्रोत हुँदैन भने त्यो व्यक्ति अपराध गर्न वाध्य हुन्छ। यदि जो कोहि पनि आफ्नो आधारभूत आवश्यकतालाइ पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ भने त्यो व्यक्ति अपराधिक कार्य गर्न वाध्य हुने गर्दछ। अहिले हालको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने पनि सारा देश, विश्व बन्द रहेको अवस्थामा छ। धेरै मानिसहरुको आय श्रोत नभए पछि आफु बाँच्नको निम्ति कि त माग्नु पर्यो, कि त चोर्नु वा लुट्नु बाहेको अरु उपाए नभए पछि उनीहरु अपराधिक गतिविधि तिर अग्रसर हुने गर्दछन। सायद नेपालमा पनि यसरी व्यापक रुपमा अपराधिक कार्यहरु बढ्नु को मुख्य कारण यो हुन सक्छ।
सामान्य रुपमा हेर्दा परिवार र समाजले पनि अपराधिक गतिविधिमा घटी-बढाउ को निम्ति निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। कुनै पनि बच्चा यदि माया पाएर हुर्कियो, सव्य बानि व्यवहार गर्ने, संस्कार सिकाउने परिवारमा हुर्कियो भने उसले सँधै माया देखेको हुन्छ र सिकेको हुन्छ तर कुनै बच्चा यदि विथोलिएको परिवार, झगडा भई राख्ने परिवारमा हुर्कियो भने उसले सँधै हिंसा मात्र देखेको हुन्छ। यसले पनि अपराध गतिविधिमा लाग्न नालाग्नामा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तै आफु बस्ने समाज जुन किसिम को हुन्छ , त्यो व्यक्तिले त्यही अनुसारको व्यवहारलाई अपनाउने गर्दछ। त्यसैकारण आफ्नो परिवार र आफु बस्ने समाज, वरिपरिका मानिसहरुले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा अपराधिक कार्य गर्नमा भूमिका खेल्ने गर्दछन्।
अनुचित न्यायिक प्रणाली पनि अपराध हुनुको एउटा मुख्य कारण हो। यदि देशको न्याय प्रणालीले उचित न्याय दिन सक्दैन भने त्यो देशको मानिसहरुबाट न्याय प्रणाली माथिको विश्वास पनि हट्ने गर्दछ। जब न्याय प्रणालीमा नै विश्वास रहदैन, मानिसहरुले न्याय पाउने आश र अपेक्षा पनि संग-सँगै समाप्ति हुन्छ। यति भई सके पछि कुनै व्यक्तिले यदि कुनै अपराध गरेमा उसले सजाय नपाएमा पीडितले न्याय नपाउने हुन्छ र त्यसो भए पछि पिडित वा पिडितको आफन्तहरुमाझ बदलाको भाव प्रकट हुने गर्दछ र अपारधजस्तो गतिविधिमा उनीहरु संलग्न हुन थाल्छन्। तसर्थ यदि देशको न्यायिक प्रणाली मजबुत भएमा अपराधीले पनि सजाय पाउने गर्दछ र पिडितले न्याय, यदि त्यसो नभएमा झनै अपराधिक गतिविधिहरु बढ्न थाल्छन्।
सरसर्ती हेर्दा यी कारणहरु अपराध गतिविधि बढ्नुको मुख्य कारणका रुपमा देख्न सक्छौँ। रुकुम-जाजरकोट को उक्त सामुहिक हत्याको कारण जातीय विवाद बाट भएको भनिएको छ। मोरंग बेलबारीको आमा को हत्या गरि छोराले आत्महत्या गर्दा को कारण भनेको लागु औषधको रुपमा देखिएको छ। भक्तपुरमा भएका शिशुको हत्या र ए.टि.एम बाट पैसा चोरी गर्ने जस्ता कार्यका मुख्य कारणलाई हेर्दा वेरोजगारी, अभाव र वञ्चितता हुन् जसले आफ्नो माग, आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न नसक्दा उक्त कार्य गरको भनि अनुमान लगाउन सक्छौँ। साथिको संगतमा अपराध गतिविधिमा संलग्न भई अपराध गर्ने मात्र नभई आफु अपराधिहरुको शिकारमा समेत पर्न सक्ने कुराको उद्दारण रुकुम-जाजरकोट कै घटना रहेको छ जसमा एक जना बाहेक अन्य सबै साथि भाई भनि गएका थिए।
अन्त:त नेपालमा यसरी एक पछि अर्को गर्दै अपराधिक घटना घट्ने भनेको राम्रो कुरा होइन। यसले समाज लगायत सिंगो देशलाई नै एउटा होशियारी र सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्थाको संकेत दिएको छ। यस्तो लक डाउन अवस्थामा समय बिताउन, आफ्नो गुजारा गर्नु कुनै सजिलो कुरा होइन, जताततै आयश्रोत रोकिए पशात खान लगाउन नपुगे पछि पनि मानिस भोकमरीले मर्न सक्ने सम्भावना छ तर यसको अन्तिम उपाए भनेको अपराध गर्नु नै भने पक्कै होइन। सरकारले पनि यस विषयमा निकै गम्भीर भएर आफ्नो कदम चाल्न अत्यन्तै जरुरि छ। यदि यहि रुपमा अपराधिक घटनाहरु बढ्दै जाने हो भने समाजमा शान्ति हुँदैन र मानिसहरु डर, त्रासमा बस्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। कोरोनाको डर सँग-सँगै अपराध गतिविधिले पनि थप त्रास दिएको अहिलेको अवस्था छ। तसर्थ यो समयमा कोरोना संग संगै अपराधिक गतिविधि हुन र गर्न बाट बच्न सतर्कता अपनाउन निकै आवश्यक देखिन्छ।
सिमा विवादलाइ पानीजहाजमा जोड्ने शुत्र
बाबुरामको बरियता र खिसिट्युरी